च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनाको पहिलो जित, स्वरेजको उत्कृष्ठ गोल
काठमाडौं, १३ असोज । स्ट्राइकर लुइस स्वरेजले खेलको अन्तिम समयमा प्रहार गरेको गोलको मद्दतमा बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा पहिलो जित हात पारेको छ । मंगलबार राति घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले बार्यन...
राष्ट्रिय लिग फुटबल: जितसँगै आर्मी तेस्रो स्थानमा
काठमाडौँ, १२ असोज । राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लब विजयी भएको छ । सात दोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आर्मी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै...
अमेरिकामा नेपाली खेलाडी ठकुरीलाई पूनःस्वर्ण पदक प्राप्त
पेन्सलभेनिया l नेपाल सितोरियु करातेका अमेरिका निबासी खेलाडी उज्ज्वल ठकुरीले सेप्टेम्बर २६ तारिक शनिबारका दिन पेन्सलभेनिया राज्यको अल्तोनसहरमा सम्पन्न (PMAA FALL BRAWL FOUR, WARRIORS UNITED CIRCUT GAME)मा ३५ देखि ४४ बर्षको उमेर समुहको २...
जीतसँगै झापाको २४ अङ्क, पुलिस पराजित
लक्ष्मी काफ्ले बिर्तामोड, १० असोज । जारी रेडबुल राष्ट्रिय लिगअन्तरगत आइतबारको खेलमा झापा ११ ले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लवलाई पाखा लगाएको छ । सुरुङ्गा खेल मैदानमा भएको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा झापाले पुलिसलाई २–०...
रोनाल्डो विश्कै मंहगो खेलाडी, कति पुग्यो रेट ?
काठमाडौं, १० असोज । विश्व फुटबलका स्टार खेलाडी तथा स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वकै महंगाका खेलाडी बनेका छन् । यसै साता उनको स्थानान्तरण मूल्य समेत तोकिएको छ । स्पेनिस क्लब...
विश्व च्याम्पियन मीरा गोदावरी रनिङमा पनि प्रथम
काठमाडौँ, ९ असोज । केही महिनाअघि फ्रान्समा आयोजना भएको अल्ट्रा म्याराथनकी विश्व च्याम्पियन मीरा राईले दोस्रो गोदावरी रनिङ फेस्टिबल दौड प्रतियोगितामा पनि पहिलो स्थान हात पारेकी छिन् । गोदावरीमा आज भएको महिलातर्फको २० किमी...
झापा ११ले आर्मीलाई हरायो
लक्ष्मी काफ्ले बिर्तामोड, ८ असोज । राष्ट्रिय लिगअन्तरगत शुक्रबार भएको खेलमा झापा ११ ले नेपाल आर्मीको अपराजित यात्रालाई पूर्णबिराम लगाएको छ । वर्षातका कारण बिर्तामोडस्थित डोमालाल रङ्गशाला हिलाम्मे भएपछि सुरुङ्गाको खेल मैदानमा भएको खेलमा...
अमेरिकामा नेपाली खेलाडीले जिते पदक (फोटो फिचरसहित)
अमेरिका । नेपाल सितोरियु करातेका अमेरिका निबासी खेलाडी उज्ज्वल ठकुरीले गत सेप्टेम्बर १९ तारिख शनिबारका दिन न्युजर्सी राज्यमा सम्पन्न युनाइटेड मार्शलआर्टस रेफ्री एसोसिएसन लिग च्याम्पियनसिपमा ३५ देखि ४४ वर्ष उमेर समुहको खेलमा तेस्रो पदक जित्न सफल...
को-को परे विश्वकप क्रिकेट टोलीमा ?
काठमाडौँ, ८ असोज । मलेसियामा यही असोज २३ देखि कात्तिक ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने उन्नाइस वर्षमुनिको आइसिसी विश्वकपको छनोटका लागि बिहीबार नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले १४ खेलाडी र चार वैकल्पिक खेलाडीको छनोट गरेको...
मेस्सी नचलेपछि पहिलोपटक बार्सिलोना हार्‍यो, रोनाल्डोको रियल मड्रिड शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं, ७ असोज । प्रमुख स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी चल्न नसक्दा डिफेण्डिङ च्याम्पियन बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा सिजनको पहिलो हार व्यहोरेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा बार्सिलोना सेल्टा भिगोसँग ४–१ को फराकिलो अन्तरले...
काठमाडौँ, ५ असोज । आगामी वर्ष भारतमा हुने एएफसी १६ वर्षमुनि उमेर समूहको (यु–१६) च्याम्पियनसीप प्रतियोगितामा छनोट भएको नेपाली युवा टोली आज स्वदेश फर्किएको छ । किर्गिस्तानमा भएको उक्त छनोट प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’...
नेपालकोे एएफसी यु-१६ च्याम्पियनसीप खेल्ने सपना जीवितै
काठमाडौँ, ४ असोज । आगामी वर्ष भारतमा हुने एएफसी १६ वर्षमुनि उमेर समूहको (यु–१६) च्याम्पियनसीप खेल्ने नेपाली युवा टोलीको सपना पूरा भएको छ । आइतबार राति किर्गिस्तानमा भएको यु–१६ च्याम्पियनसीप छनोट फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक...
« 1 … 317 318 319 320 321 … 393 »